Al-Shabaab oo xirtay Abu Mansoor al-Amriki
Maarso 19, 2012
Al-Shabaab ayaa Axaddii (18-ka March) xabsiga u taxaabay xubin Maraykan ah Cumar Xamaami oo ka tirsanaa kooxda laakiin magac-dheeraa Abuu Mansoor al-Amriki ka dib markii uu dhacay khilaaf soo shaac-baxay oo ku saabsan istraatijiyadda kooxda, Idaacadda Shabeelle ee Soomaaliya ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Xamaami ayaa Sabtidii cajalad muuqaal ah soo dhigay dhawr shabakad wareed oo af-Soomaaliga lagu qoro iyo YouTube-ka, isagoo sheegaya in ay naftiisu ku jirto halis uga imanaysa dagaalyahannada saaxiibbadiis ah. Waxaa la soo sheegay in lagu xiray gurigiisa oo ku yaal koofurta Soomaaliya. "Waxaan maanta farriintan u duubayaa, sababtoo ah waxan dareemayaa halis naftayda uga imanaysa Xarakada Mujaahidiinta al-Shabaab ka dib markii ay na dhex mareen khilaafyo ku saabsan sharecada iyo istiraatiijiyada,” ayuu Xamaami ku yiri farriinta muuqaalka ah. Xamaami ayaa loo arkaa in uu yahay hoggaamiye muhiim ah oo ka mid ah dagaalyahaniinta ajnebiga ah ee kooxda oo uu ku biiray 2006-dii. Ka dib markii ay cajaladdu soo baxday, al-Shabaab ayaa waxay muujisay “dhakafaar” waxaanay beeniyeen in ay nolosha Hamami ku jirto wax halis ah, AFP ayaa werisay. "Waxaannu walaalaha Muslimiinta ah u xaqiijinaynaa in al-Amriki aanay halis ku hayn Mujaahidiinta oo uu walaalkeen weli ku raaxaysanayo dhammaan galladaha ay leedahay walaalnimadu,” ayuu xafiiska kooxda ee saxaafadda ku shaaciyay boggooda Tiwitarka. Farriinta muuqaalka ah ayaa culays ku sii kordhinaysa warbixinno tibaaxayey kala qaybsanaan sii kordheysa oo ka dhex jirta al-Shabaab, oo hadda wajahaysa cadaadis ka saaran saddex furimood oo ay ka soo socdaan ciidamada gobolka iyo kuwa dawladda raacsan. Taliyeyaasha al-Shabaab ayaanan wax faahfaahin ah ka bixinin xarigga Al-Amriki.